Uvavanyo lobushushu olusezantsi lwe-assembley - iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Uvavanyo lwendibano yeqondo lobushushu eliphantsi esetyenziselwa ukuvavanya ukubanakho kwezihlanganisi ukuba nonxibelelwano lombane olunokubakho phantsi kobushushu obuphantsi. Xa imveliso ichanekile kwindawo enobushushu obusezantsi ixesha elide, ukusebenza, ukusebenza, umgangatho kunye nobomi bemveliso bunokuchaphazeleka. Oku kufuna ukuvavanywa kobushushu obuphantsi kwemveliso ukuvavanya ukumelana nemveliso kumaqondo obushushu asezantsi.
UJera uqhubeka novavanyo kwiimveliso ezingezantsi
-Ukuphantsi, okuphakathi kunye nokucheba okuphezulu kwentloko yokucheba intloko.
Isinxibelelanisi esixhonyiweyo sokugqobhoza kufuneka sibe nonxibelelwano lombane oluzinzileyo phakathi kwabaqhubi xa bephantsi kobushushu obuphantsi. Sayifaka kwigumbi elinekhephu kwaye savavanya unxibelelwano lwayo lombane xa i-torque yamandongomane ilungisa.
Umgangatho wethu wovavanyo ngokweCENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T1190-2012 yezixhobo zokuhambisa umbane. Sisebenzisa ukulandela imigangatho yovavanyo kwiimveliso ezintsha ngaphambi kokumiliselwa, kunye nolawulo lwekhwalithi yemihla ngemihla, ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu banokufumana iimveliso ezihlangabezana neemfuno zomgangatho.